Top 10 Artists House Music
House Music waa nooc kasta oo muusiko ah oo la helo caan dunida oo dhan, la bilaabay Chicago ee koox magaca Warehouse oo ahaa ku badan yihiin madow iyo Latinos, music guriga asal ahaan waa qoob ka elektaroonik ah. Waxa uu sii jahaysteen soo baxay in qaybaha sub sida guriga oo qoto dheer, horumar guriga electro-guriga iyo guriga casriga ah in ay heysatay ee gooldhalinta hogaanka music sanadihii la soo dhaafay. Siidi by dardar ee la ruxruxo noocani oo muusiko ah uu waxaas uumay dhab ahaan dareemeysaa music guriga halkan waa in ay sii joogaan iyo sii wadi doonaa inay xukumaan suuqa music ee sanadaha soo socda. Iska ilaali 10 fanaaniin guriga music ugu sareeya hoos ku siiyo.
Part1. Yolanda U Cool
Part7. Hubin Punk
1) Yolanda U Cool:
Ka kooban Sylvester Martinez iyo Johnson "Durango Slim" Peterson, Yolando U Cool waa urur Australia magiciisu yahay tixraac goobta ah ee Fiction saxarka. Band ayaa gacan saar la leeyihiin DCup iyo remixed ay hit "Afro Loos" ee 2009. Intaas ka dib waxa ay sii deysay hal "Waxaan No hadal Americano" in waxaa u digay isaga Andy Hylton. Tani hal waddan oo kaalinta gooldhalinta ee dalal badan. Ka dib waa hits hal ay.
Cow Quduuska ah
Ka hor saqdii dhexe
Tijs Michiel Verwest loo yaqaano by magiciisa stage Tiesto waxa uu ku dhashay 1969 iyo waa DJ oo rikoor soo saare Dutch. In 1994 Tiesto kulmay Amy Bink oo dhammaantood way wada abuuray ay calaamad u gaar ah, Black Hole cajalado iyo bilaabay daayo music. Waxa uu helay taageero sii daayay oo uu u saftay album "In My Memory" ee 2001 in ku jira 10 oo kaliyaha iyo 5 hits. Sannadkii 2004 ayuu sii daayay uu u saftay labaad "xaq ugu noqon karaa". Isaga oo kali soo socda ka album ugu horeysay ee heshay ratings sare.
Joel Thomas Zimmerman loo yaqaano ee uu magacaabay deadmau5, waxaa loogu dhawaaqaa sida "mouse dhintay ', waxa uu ku dhashay 1981-dii, waa soo saare music Canada oo qaab ciyaareed. Track An demo jir ah oo Deadmau5 1995 wararmayay Youtube 2012 Zimmerman sii daayay uu u saftay album "Get la xoqay" 2005 isaga u gaar ah record calaamadda "mau5trap" Waxa uu bilaabay sanadkii 2007. Waxa uu ku guuleystay DJ Best Korontada Golaha Award iyo International Best ah saddex jeer DJ Award. Ka dib waa hits hal uu.
'N' Kyung Stuff
Qaar ka mid ah Chords
Armin van Buuren ku dhashay 1976 waa music soo saare Dutch ah, shakhsiyadda radio iyo DJ ah oo ka qalin jabiyay dugsiga sharciga ee 2003. Van Buuren uu guul ugu horeeyay sanadkii 1995 la track ah oo lagu magacaabo "Blue cabsan" kaas oo sanadkii 2000 soo galay Chart UK ee No. 18. Sanadkii 1999 uu calaamad u gaar ah Armind uu bilaabay si wadajir ah ula United cajalado. Sannadkii 2012-kii iyo 2013-van Buuren guuleystay Music Dance Caalamiga ah Awards ee Global Record Label Best. Uu soo socda albums studio ayaa sidoo sidoo kale helay.
Nick Leonardus van de Wall waa magaca buuxa ee Afrojack oo ku dhashay 1987 iyo waa soo saare music Holland iyo DJ. Oo wuxuu bartay inuu u ciyaaro piano ee da'doodu aad u yar yar ah. Van de Wall bilaabay DJ'ing da'da 14 at masraxyada maxalliga ah iyo kooxaha. Wuuna sii daayay "In wejigaaga" 2007 helay guusha ee caalamiga ah. Afrojack lagu daray liiska sanadkii 2011 sida lambarka 7 on DJ Mag Top 100 DJ. Kuwa soo socda hits hal ka album "Ha illoobin erayga" helay abaalmarino caalami ah.
Sida Your Friend
Tim Bergling waa magaca buuxa ee Avicii oo ku dhashay 1989 iyo waa DJ, record soo saare iyo remixer Sweden. Sannadkii 2007 ayuu saxiixay la calaamadda Dejfitts Riwaayado. Avicci sii daayay "Heerarka" in sanadkii 2011-kii isaga bilaabay caadiga ah. Wuxuu gacan saar la David Guetta ee 2012 iyo soo saaray track "Sunshine" in uu u sharaxan abaalmarinta Grammy ah. Avicci sidoo kale wuxuu ahaa qaataha ah ee 2 World Music Awards ee 2014. socda hits hal isaga guulaha ganacsi kasbadeen.
Ma laga yaabaa inaan ka mid noqdo ayaa
Waxaad iga dhig
7) hubin Punk:
Ka kooban Guy-Manuel de Homem-Christo iyo Thomas Bangalter, hubin Punk waa Koox Faransiiska oo ugu waaweyni waxay ahaayeen Boys Beach iyo Stones Rolling ayaa saamayn. 1996 guutadii saxiixday Virgin Records kaas oo ay shati raadkooda iyada oo shirkadda ay wax soo saarka hubin Trax. Hubin Punk waa qaataha koobab fara badan oo ay ka mid yihiin abaalmarinta Grammy Awards 2 ee 2009 iyo 4aad ee 2014. Ka dib waxaa la hits hal ay.
Mid ka mid ah More Time
Harder, Better, si dhakhso adag,
Sonny John Moore waa loo yaqaano by magiciisa stage Skrillex iyo waxa uu ku dhashay 1988 wuxuuna waa music soo saare elektaroonik ah, oo gabayaa ahaa iyo DJ ah oo lagu homeschooled sabab u xoog sheegashada. Sannadkii 2008 Skrillex bilaabay bandhig kooxood ee Area Los Angeles ee. Moore sii daayay uu u saftay EP "Magacaygu waa Skrillex" ee 2010 sida a free download. Waxa uu ku guuleystay 2 Grammy Awards 2012 iyo 3 ee 2013. Waa maxay isaga guulaha ganacsi kasbadeen ahaayeen hits soo socda.
Soo qaado Out Ibliiska
Kowaad ee sannaddii
Robbert van de Corput waa loo yaqaano by magiciisa stage Hardwell iyo waxa uu ku dhashay 1988 uu yahay guri Dutch electro iyo DJ guriga qol iyo music soo saare weyn oo bilaabay barashada piano classical iyo DJ'ing. Sannadkii 2003 oo uu u saftay remixing la sii daayay iyo kooxaha ka dhacay. Toban sano ka dib Hardwell bilaabay safar ay caalamka uu cinwaankeedu yahay "waxaan ahay Hardwell". Waxa uu iibin ay muujinayso in Jakarta, Singapore, Mumbai, Bangalore, Lisbon iyo London. Hits waxaa ka socda.
Qof walba ma in meesha ugu
Steven Hiroyuki "Steve" Aoki dhashay 1977 waa rikoor soo saare American, ah muusikiiste guriga electro iyo fulinta music oo aabihii yahay aasaasihii silsiladda makhaayad caan Benihana ah. Waxa uu aasaasay uu calaamad u gaar ah oo cinwaankeedu ahaa "Dim Mak Record". Aoki waxaa si weyn loo yaqaan for tuuraya cake taageerayaasha, uu stunts fankooda dadkii badnaa ciyaarta dabaasha, fuushan doomo yar-yar dabaqa cayaarta oo ku xereen dhalooyin qamri ah. Waxa uu marin caalami kasbatay uu remixes soo socda.
Mugti ah Dhiig
Waan jeclahay marka Waxaad qayli
U dhashay Hel Wild
> Resource > Music > Top 10 House Music Artists oo ay caan ku Music